Molly Hager koa dia nanatevin-daharana ny mpilalao miniseries Dimy andro tao amin'ny Fahatsiarovana | Avy amin'ny mac aho
Andro vitsy lasa izay, niresaka momba ny fanampiana farany an'ireo mpilalao miniseries izahay Dimy andro ao Memorial: Cherry jones, sonia izay tsy ny farany, satria araka ny Deadline, Molly Hager koa nanatevin-daharana ny mpilalao an'ity miniseries ity izay hanomboka premiere amin'ny Apple TV +.
Ankoatr'i Cherry Jones sy Molly Hager, ao anatin'io mpilalao io koa i Very Farmiga, Adepero Oduye, Jilie Ann Emery ary Cornelius Smirth Jr.. Raha raisintsika izany ny mpilalao lehibe dia efa vita, Raharaha herinandro maromaro alohan'ny hanombohana ny fanaovana ny sary, mieritreritra fa efa mandeha ny famokarana.
Molly Hager dia nandray anjara tamin'ny andiany maromaro como el happyish, Inddor boys sy ny sarimihetsika Tantara saika mampihomehy.
Dimy andro ao Memoria dia mampiseho amintsika ny fandalovan'ny rivodoza Katrina namakivaky New Orleans, manadihady ireo olana ara-pitondrantena sy etika izay teren'ny mpikambana ao amin'ny hopitaly. Ny andiany dia mifototra amin'ny boky mitovy amin'ny anarana nosoratan'i Sheri Fink, mpandresy loka Pulitzer. John ridly y Carlton Cuse Izy ireo no hitarika ny fizarana 8 mandrafitra an'ity miniseries ity, ankoatry ny famokarana mpanatanteraka sy ny asa soratra.
John ridley nahazo Oscar avy amin'ny Hollywood Academy ao amin'ny sokajy sarimihetsika tsara indrindra namboarina tamin'ny sokajy sarimihetsika Fanandevozana 12 taona, raha i Carton Cuse kosa dia manana ny loka Emmy ho an'ny asany amin'ny maha-mpanatanteraka mpanatanteraka ny andiany Lost.
Cherry jones nandresy tamin'ny loka Emmy 3 (24, Ny tantaran'ny ankizivavy y Fahombiazanaon) sy Tony ary nandray anjara tamin'ny andiany teo aloha Arovy i Jakôba miaraka amin'i Chris Evans, andian-tantara hita amin'ny Apple TV + ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Molly Hager koa dia nanatevin-daharana ny mpilalao miniseries Dimy andro tao amin'ny Fahatsiarovana